Nhau - Zvimiro uye Zvitarisiko zveMakina Mashini Zvikamu Kugadziriswa
Zvimiro uye Zvitarisiko zveMakina Mashini Ekugadzirisa Muchina
Iyo chaiyo machining indasitiri yagara iri yebasa-inotyisa, capital-nyanyisa, uye tekinoroji-nyanyisa indasitiri. Iyo indasitiri ine yakakwira chikumbaridzo. Kunyangwe kana bhizinesi rese risingasvike pane imwe nhanho, zvichanetsa kuwana purofiti. Makambani makuru anogona kudzikisa mutengo kuburikidza nekutenga kukuru uye kugadzirwa, kufambiswa kwebhizinesi, uye kuvaka musika wekutengesa wedunhu unovhara zvigadzirwa kubva kumatunhu akasiyana nemaindasitiri. Naizvozvo, nemazvo machine indasitiri ine ine simba Hengqiang mamirire. Mune ramangwana, iyi indasitiri ichatarisa zvakanyanya kusangana, kusangana kwematunhu, kusangana kweindasitiri uye kusangana kwakabatana.
Pakati pavo, kusangana kwematunhu ndiko kusanganiswa kwemabhizinesi ekugadzirisa chaiwo mudunhu rimwe chete, saka inogona kutarisa kushandiswa kwesarudzo uye manejimendi mabhenefiti, uye kuburitsa kubatana kwakanaka pamwe nekubatira. Maindasitiri ngetani yekubatanidza ibasa rimwechete rakabatanidzwa neyakagadziriswa indasitiri, kana ekumusoro ekumusoro makambani ekugadzira anogona kushanda neakakosha echinhu vatengesi kugadzirisa matekiniki emagetsi anotarisana nezvinhu zvakaoma; kusanganisa kwakarongeka ndiko kuunzwa kwevakabatana mudare senge mota nemasoja kuti Vanzwisise zvido zvezasi zvakanyatsorongeka, kugadzira zvigadzirwa zvakanangwa, uye kudzikisa kurasikirwa zvisina basa panguva yekutsvaga nekusimudzira.
Maitiro ekunyatsogadzirisa zvikamu zvekugadzirisa ane zvakanyanya kuomarara zvinodiwa. Kusava nehanya kwakanyanya panguva yekugadzirisa kuchaita kuti chikanganiso chepa workpiece chipfuure iyo shiviriro renji, uye zvichave zvakafanira kudzokorora kana kuzivisa zvimedu zvechisina chinhu, izvo zvinowedzera zvakanyanya mutengo wekugadzira. Naizvozvo, nhasi tinotaura nezve izvo zvinodikanwa zvezvakanaka zvikamu zvekugadzirisa, izvo zvinogona kutibatsira kuvandudza kugona kwekugadzira. Yekutanga ndeye saizi inodikanwa. Ive neshuwa yekuteedzera zvakanyanya fomu uye chinzvimbo kushivirira zvinodiwa zvemufananidzo wekugadzirisa. Kunyangwe izvo zvinhu zvakagadziriswa uye zvakagadzirwa neiri bhizinesi zvichizenge zvisina kunyatsoenzana nehukuru hwedhirowa, izvo zviyero zviri mukati mekuregererana kwematanho ezve dzidziso, izvo zvese zvigadzirwa zvinogoneswa uye zvinogona kushandiswa zvikamu.
Kechipiri, maererano nemidziyo, kuomesa uye kupedzisa kunofanirwa kuitwa pachishandiswa michina ine mashandiro akasiyana. Nekuti iyo yekukasira maitiro inodimbura mativi mazhinji eiyo isina chinhu, iyo yekushandira ichagadzira huwandu hwakawanda hwekunetseka kwemukati kana chikafu chakakura uye kudzika kwekudzika kwakakura. Panguva ino, kupedza hakugone kuitwa. Kana iyo workpiece yapera mune imwe nguva yenguva, inofanirwa kushanda pane yakakwira-chaiyo muchina kuti iyo yekushandira ikwanise kugona kwakanyanya.
Kugadziriswa kwezvakanaka zvikamu kazhinji kunosanganisira kurapwa kwepamusoro uye kurapwa kwekupisa. Iyo yekurapa kwepamusoro inofanirwa kuiswa mushure mekujeka kwemashini. Uye mune chaiyo machining maitiro, iyo hukobvu hwetete yakatetepa mushure mekurapwa kwepamusoro inofanirwa kutariswa. Kurapa kwekupisa ndiko kugadzirisa iko kwekucheka kwesimbi, saka inoda kuitwa pamberi pekugadzira. Izvi zviri pamusoro ndizvo zvinodiwa kuteverwa mukugadziriswa kwezvakanaka zvikamu.
Post nguva: Chivabvu-27-2020